Family – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
ကလေးအပါအ၀င် တစ်မိသားစုလုံး နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းနေအောင် အိမ်ရှင်မ လုပ်ပေးသင့်သော အရာများ
ငွေကြယ်စင်ယံ သင့်ကလေး၊ သင့်ခင်ပွန်းနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင် နှလုံး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေအောင် သင့်တော် တဲ့ အစားအသောက်တွေ ကျွေးမွေးဖို့ အိမ်ရှင်မတွေ ဟာ အောက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) အစာကို နည်းနည်းစီ မကြာခဏ ကျွေးပါ ကလေးတွေ အပါအ၀င်...
အိမ်ထောင်ဖက်ကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောခြင်းက သာယာသော အိမ်ထောင်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်ဟု ဆို
သဒ္ဒါထက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းပြီး သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့နဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုက အကြံပြုထားပါတယ်။ “သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုယုံကြည်ပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ ‘ကျေးဇူးတင်ပါတယ်’လို့ ပြောပေးတာက အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အပေါ် သင်ဘယ်လို ခံစားရတယ်၊ သင်ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်တယ်၊ အိမ်ထောင်မှုဘ၀အပေါ် သင်ဘယ်လောက် ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ...
သင့်ကလေး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာစေရန်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေကြီးပြင်းတဲ့အထိ အနာတရမရှိဘဲ ကျန်းမာနေစေဖို့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းမွန်နေရပါမယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကျန်းမာဖို့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်တွေထဲမှာ အာဟာရ၊ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အိပ်စက်အနားယူမှု စတာတွေက လိုအပ်နေတဲ့အတွက် မိဘတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်အနားယူပါ...
ကလေးငယ် သွားလဲချိန် မိဘတို့ အထူးဂရုစိုက်ပေးရမည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ကလေးတွေက ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ငယ်သွား လဲလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ကလေးတွေမှာ ငယ်သွားနဲ့ ကြီးသွားဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ “လူငုပ်တုပ်၊ သွားငုပ်တုပ် ဆိုသလို ငယ်သွားက အသက်ခြောက်လအရွယ်မှာ...
အိမ်ထောင်သက် ၁၈ နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည့် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနှင့် ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းတို့၏ လက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မျှဝေချက်များ
၊ လရိပ်မေ ၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းတို့ဟာ အခုဆိုရင်အိမ်ထောင် သက် ၁၈ နှစ်ပင် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အခုအချိန်အထိ သာယာခိုင်မြဲနေဆဲ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘယ်လို လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ (၁) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မျှဝေပါ “ကျွန်မတို့တွေ...
ကျောင်းသားများ ထူးချွန်စေရန် မိဘတို့လုပ်ဆောင်သင့်သည့် နည်းလမ်းခုနစ်သွယ်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကျောင်းတက်နေတဲ့ သင့်ကျောင်းသား / ကျောင်းသူလေး ထူးချွန်အောင်မြင်စေဖို့ရာအတွက် ကျောင်းသားမိဘတို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကျောင်းကို မကြာခဏသွားလည်ပါ သင့်သားသမီးဟာ ကျောင်းမှာ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းရဲ့လား၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာသင်ကြားရဲ့လား စတာတွေကိုသိနိုင်ဖို့...
ဘိုးဘွားအရွယ်အထိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခိုင်မြဲနေစေမည့် နည်းခြောက်သွယ်
၊ လရိပ်မေ ၊ အိမ်ထောင်သားမွေးပြုပြီးချိန်မှာ အိမ်ထောင့်တာဝန်၊ သားသမီးတာဝန်တွေကြောင့် မအားလပ်နိုင်အောင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ရင်း၊ မိသားစုငွေရေးကြေးရေး စီမံခန့်ခွဲရင်း၊ နာမကျန်းမှုအတွက် ပြုစုပေးရင်းနဲ့ ကလေးတွေ အရွယ်ရောက် လူလားမြောက်လာချိန်မှာ အသက်ကြီးမှန်းမသိ ကြီးလာပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ဘုရားသွား၊ ကျောင်းတက်...
သင့်ကလေး အအေးမိဝေဒနာ ရနေလျှင်
လရိပ်မေ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးကြောင့် အအေးမိဝေဒနာရတတ်ပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းတဲ့အတွက် တစ်နှစ်တည်းမှာ အကြိမ်ကြိမ် အအေးမိဝေဒနာ ရတတ်ပါတယ်။ အနားယူခိုင်းပါ အအေးမိဝေဒနာ ဖြစ်ကာစ ၂-၄ ရက်အတွင်းမှာ သူများကို အလွန်ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေရာက ထွက်လာတဲ့ ပိုးပါနေတဲ့...
ကျောင်းဘတ်စ်ကား အတိုက်ခံရသောသမီးကြောင့် ရင်ကွဲနာကျသည့်မိခင် သတိလစ်မေ့မျောသွား
၊ မိုးမင်းထွန်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ၁၀ နှစ်သမီးအရွယ် လေးတန်းကျောင်းသူ ရာကယ်လီဒေးဗီးစ် ဟာ ကျောင်းသို့ လမ်းလျှောက်သွားစဉ် ဘတ်စ်ကားအတိုက်ခံခဲ့ရပါ တယ်။ မျက်မြင်သက်သေတွေအဆိုအရ ရာကယ်လီဟာ လမ်းကိုဖြတ်ကူးစဉ် အရှိန်နဲ့ကွေ့လာတဲ့ ကျောင်းဘက်စ်ကားနဲ့ အတိုက်ခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရာကယ်လီကို ဆေးရုံသို့အရေးပေါ်တင်ခဲ့ရကာ သူ့မိခင်ဟာ...
နားရက်ယူပါ . . နားပါ
၊ လရိပ်မေ ၊ အလုပ်ကနေ နားရက်ယူတာက သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရစေရုံသာမက အလုပ်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်း အလုပ်တွင်ကျယ် စေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ နားရက် ဘယ်လောက်ဆိုပြီး သီးသန့် သတ်မှတ်ထားပြီး မဖြစ်မနေ နားရက် ယူရပါတယ်။...